"Skins» (Skins) - kuba okukhulu ewuchungechunge yethelevishini ekhuluma ngokuphila intsha British 16-18 iminyaka ubudala, ohlala e Bristol. Iphrojekthi okuqalwe telestsenaristov Bryan Elsley nendodana yakhe Dzheymi Brittana ethunywe Inkampani Isithombe. Premiere show sasibanjelwe isiteshi E4 ngoJanuwari 2007. Ukuqopha ikakhulukazi okwenzeka e Bristol, futhi ngabanye izigcawu esikoleni okudalwe ekolishi futhi Filton Academy D. Kobota.
"Skins" (abadlali yochungechunge osheshayo baye bayinqoba udumo entsheni) - iphrojekthi nasengqondweni eziyinkimbinkimbi futhi ngempela enengqondo. lwendaba yakhe iqukethe incazelo ejulile. Abadali ngenhloso engavimba izinhlamvu ezifanayo kanye ukushintsha gqwa izinhlamvu, ebhekisela gcwele zukulwane of zonyaka ezimbili. Kuwo wonke zonyaka eziyisikhombisa uchungechunge sethelevishini "Skins" waphonsa uzongiphika kathathu. Uchungechunge ngalunye entsha igxila uhlamvu olulodwa. Ngenxa isakhiwo esinjalo, isiqephu ngasinye ihlukile kwezinye emkhathini, isimo kanye nesakhiwo sendzaba. Abalobi ukukhombisa ngamabomu izimpilo zabantu abasha ngaphandle embellishment: umbukeli kuboniswa ngokoqobo, ngezinye izikhathi ezithile ezimbalwa nehaba. Izinhlamvu basondelene kakhulu intsha yanamuhla. Abaqondisi umsebenzi iqembu nabalobi njengabawufanelekele udumo, futhi enye plus omkhulu ochungechungeni - zihambisane nezinsimbi zomculo.
Amazing game abadlali abasha kakhulu ayilokothi iyeke mangaza umbukeli ngokusebenzisa wonke amasizini ayisikhombisa. Iyathinteka ukuze isizukulwane sokuqala ochungechungeni "Skins", abadlali ngubani kuleminyaka emibili zonyaka Uzame ngempumelelo ukudala izithombe ngokucace.
Stony Tony (kudlalwa uNicholas Hoult) - smart, ekhangayo futhi zithandwa kakhulu nge insizwa ontanga. Uyena "kulethe" kweziningi izenzakalo, nakuba ngezinye izikhathi ke kungaqashelwa zokukhwabanisa imvelo.
Sid Jenkins (Mayk Beyli umlingisi) - uhluke ngokuphelele uTony, kodwa ngesikhathi esifanayo - ngingumngane wakhe omkhulu. umfana Notorious, engaqiniseki yena, bahlangabetana nebumatima uma esikoleni, enamahloni.
Michelle Richardson, uTony intombazane (odlala - Eypril Pirson) okungaqale kuzwakale eligcizelela ukubukeka kwangaphandle, kodwa yena ngenkuthalo futhi uma kuqhathaniswa nabanye ungumuntu ukhulile.
Keysi Eynsvort (actress uHana Murray) - ome njengeqanda intombazane umngane Michel, uhlushwa ukuphazamiseka kwemikhuba yokudla.
Kris Mayls (adlalwa Dzhozef Dempsi) - intandokazi amantombazane, inkosi amaqembu nesimo esinzima. Yena inkanuko, ziyahlanya othandweni nathishela Angie kwengqondo.
Secondary, kodwa akukho esingabalulekile kangako, u
Akekho omunye izinhlamvu akuyona "Skins" engadingekile ochungechungeni (isizini 1). Abalingisi ababedlala asekelayo izindima nazo enkulu ngoba ukunikeza isithombe esibanzi kwendaba.
Jal Phaser (odlala - Larissa Wilson) - a clarinetist abanamakhono futhi intombazane ezinengqondo kakhulu.
Maxi Oliver (adlalwa Mitch Hewer) udonsa kahle futhi uthanda ukudansa. Nakuba uhlamvu gay, kodwa kungokwalowo kunalokho ingxenye abesilisa inkampani kuka intombi.
Anwar Kharral (indima Dev Patel umculi) - ngumngane Max, i nezimo kakhulu Muslim: besebenzisa utshwala nezidakamizwa.
isizukulwane Okwesibili. omisiwe
injabulo Ngenxa ka "Skins" uchungechunge abalingisi, okuzokwenziwa ezibalwe ngezansi ukudala ephefumlelwe. Phakathi kwabo, qiniseka basho lokhu okulandelayo:
Elizabeth "Effie" Stoney (actress Kaya Scodelario) - udadewabo uTony, umholi zemvelo, enhle futhi ethandwa. Ngesikhathi esifanayo it is kakhulu izibambe, onezimfihlo ngisho, zonke izinkinga zabo kuyimfihlo zigadiwe.
Pandora Moon (actress Liza Bekvell) - ngumngane omkhulu u-Elisabethe. Ngokungafani Effie intombazane elingenacala, futhi akaphindange shi emhlabeni abanayo ngobulili nasendleleni izidakamizwa ukudakwa, kodwa bezimisele ukukulungisa.
Thomon Thomas (umlingisi Mervil Lyukiba) - guy odabuka eCongo, imele ubuhle kanye okusezingeni eliphezulu izimiso zokuziphatha, uthandana Pandora.
Zokweseka izinhlamvu emaphakathi kwakungamanye izinhlamvu eziyisithupha ezimibalabala yochungechunge "Skins". Abalingisi kanye izindima abaqondisi zikhethwa ngokucophelela.
Dzheyms Awe-Kuk (adlalwa Jack O'Connell), JJ Jones (Ollie Barbieri) kanye Freddi Makkleyr (umlingisi Luka Pasqualino) - abakhulu, abazijwayele kusukela ebuntwaneni. Pheka akesabi neziphathimandla, nobudlelwano futhi kwakuphambana onekhono. Freddie - ezolile kakhulu futhi unesibopho uyasijabulela isikeyiti, ngezinye izikhathi othanda ukuba ngibheme imbiza.
Emily Fitch (actress Ketrin Preskott) kanye Katie (Megan Prescott) - twins ukuthi ibukeke njenge amathonsi ezimbili, kodwa ehlukene kakhulu uhlamvu.
Isizukulwane sesithathu yochungechunge "Skins". Abalingisi kanye izindima
Isizukulwane sesithathu yochungechunge kwathathwa ambiguously kokubili a baxgeki ifilimu nezithameli. Izimangalo zazingafani: izinhlamvu babe lwendaba dumber futhi ungakujabulisi kakhulu, ezazigxishwe izifanekiso. Noma kunjalo, lo msebenzi elahlekile funa yayo, "washiya" ku negagasi impumelelo, owawuya iziqephu lokuqala. Ngemva kokudedelwa "Skins" uchungechunge (isizini 3), nabalingisi owaba nengxenye umsebenzi wokwakha ngokushesha kwaduma.
Frenki Fitsdzherald (Dakota Blue Richards) imelelwa sabangafundile eyiqaphuqaphu, naphezu kweqiniso lokuthi kuba - intombazane zokudala futhi behlakaniphile. Ngenxa isendleleni androgynous ukugqoka emhlabeni kubonakala kuyisimanga.
Alo Creevey (Will Merrick) - umuntu onethemba lokuhle, nje umfana elula ophila epulazini.
Hardbek Rich (Alexander Arnold) - Alo ngamunye, egxilile ngokugcwele Metalworkers subculture.
Mini McGuinness onekhono, ebukekayo Grays Vayolet futhi ngokushesha Liv Meloun (adlalwa abadlali Freya Mavor, Dzhessiki Sula noLeya Lewis) - ngumngane omkhulu.
Futhi Nick Levan (Shon Til), umfowabo omdala Matty (Sebastian uDe Souza) obufanayo Aleks Henli (Sem Dzhekson).
Abadali isinqumo sokuphuma show uhlobo isiphetho sendaba. Esikhathini ngesizini edlule, njalo ababili uchungechunge umbukeli unethuba azijwayeze isiphetho abalingiswa abathathu ngemva kokuthweswa iziqu. Ngokwemvelo, izinhlamvu usukhulile, izinkinga zabo zibe zimbi nakakhulu ngokwengeziwe. Ziyakwazi kakade kude amaswidi.
Thriller "The Expendables 3": abalingisi, izindima, sakhiwo isifinyezo
TV ewuchungechunge "Une ingane": nabalingisi ngesakhiwo
Umlingisi Kıvanç Tatlıtuğ: Filmography, biography kanye nempilo yakho
Ikhava battens emphemeni: upende, impregnation, ukuvenisha. Isicelo Imiyalelo, amathuluzi
Amagama Primordially Russian - ukuvuselelwa isiko lwesiSlavic
Ingqikithi senhlalo nesomnotho Ezezimali, imisebenzi yayo
Voronezh Biosphere Reserve. ZaseCaucasia Biosphere Reserve. IDanube Biosphere Reserve
Ezingajwayelekile izinto ajwayelekile: Kumile ummese
Yiziphi okusanhlamvu kakolweni: namagama nezimpahla ewusizo
Grapefruit: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Biography Fedor Emelianenko - indaba nomsubathi okufanele maqondana